Puntland oo soo diiwaan galisay ciidamadii ku sugnaa Galgala – Radio Daljir
Puntland oo soo diiwaan galisay ciidamadii ku sugnaa Galgala
Febraayo 13, 2020 6:11 g 0
Guddiga dib uhabaynta Ciidamada Dawladda Puntland ayaa gaaray magaalada Galgala oo ay ku sugan yihiin Ciidamada Daraawiishta Dawladda Puntland.
Taliska Ciidamada Daraawiishta aaga Galgala waxaa kormeer shaqo ku tegay Wasiirka Maaliyadda ahna Gudoomiyaha gudiga dib uhabaynta Ciidamada Mudane Xasan Shire Cabdi, Wasiirka Amnig Mudane Cabdisamed Maxamed Galan, Taliyaha Ciidamada Daraawiishta Mudane Gen Yaasiin Cumar Dheere iyo Abaan duulaha Ciidamada Daraawiishta Aaga Barri iyo Karkaar Gaashale sare Sharmaake Shiikh Doon Aadan Barre iyo Saraakiil kale oo ka tirsan Dawladda.
Guddiga dib uhabaynta Ciidamadu in ay booqdaan galgala ayaa salka ku haysa diwaan galinta Ciidamada Daraawiishta waxana u suurto gashay in Ciidamadu maraan habka Casriga ee diwaan galinta.
Madaxda Dawladda Puntland intii ay ku sugnaa- yeen Galgala waxa ay booqdeen Goobaha Dalxiis ee ay leedahay sidoo kalena waxa ay la kulmeen dadka deeganka.
Gudiga dib uhabaynta Ciidamada oo fulinaaya balan qaadkii Madaxwaynaha Dawladda Puntland Mudane Dr Siciid Cabdulaahi Deni ee ahaa in la helo Ciidamo Tayo leh, ayaa gudiguna ku taamayaan dhismaha Ciidamada Dawladda.
Jidhdil iyo mindi-tooreyn Soomaali loogu geystay Jigjiga